Alaabada & Hiwaayadaha Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Alaabta lagu ciyaaro ee Waxbarista ah Si loo Kordhiyo Waxbarashada Caruurta
“Haddii ay yar tahay, maskaxdu waa toy-yo waxbarasho. “, Tom Robbins Alaabta carruurtu ku ciyaarto ee waxbarashadu ka kooban tahay: Ciyaaraha carruurtu ku ciyaaraan ee waxbarashadu waa walxaha ciyaarta ee sida caadiga ah loogu talagalay carruurta. Qalabka caruurtu ku ciyaaraan ayaa la filayaa inay kiciyaan barashada. Badanaa waxaa loogu talagalay inay la kulmaan ujeedo waxbarasho sida ka caawinta cunuggu inuu helo xirfad gaar ah ama u diyaarinta cunug ku saabsan […]Read More
Bixiyeyaasha Ciyaaraha Waxbarshada
Maalmahan waxaa jira alaab-qeybiyeyaal iyo soosaarayaal badan oo soo bandhigi kara qalabka caruurtu ku ciyaarto. Dabcan, waxa muhiimka ahi waa in la ogaado midka ku habboon ilmahaaga. Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal iyo waxsoosaarayaal fara badan oo ganacsi ugu jira iibinta alaabtan ujeeddooyin kala duwan. Guud ahaan alaabadaasi waxay ku iibsadaan jumlad, in kastoo ay jiraan […]Read More
Bixiyeyaasha Hubka Toy-ka ah waa inaan lagu dallacsiin Qiimaha xayeysiinta
Kani waa maqaal ku saabsan qoryaha toy-ka. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa kharashka xayeysiinta ee la xiriira iibinta qoryaha toy-ka ee Boqortooyada Midowday (UK). Xaaladaha qaarkood alaab-qeybiyeyaasha qoryaha toy-yada waa inay bixiyaan kharashka buuxa ee suuq-geynta alaabadooda. Arintaan ayaa layaab igu noqotay maxaa yeelay waxaad u maleyneysaa in shirkadaha bixiya […]Read More
Talooyin Si Aad Ku Hesho Bixiyeyaasha Dolarka
Dolls-yada waxay ubaahan yihiin alaab-qeybiyeyaal dabcan, laakiin had iyo jeer ma sahlana in la ogaado halka laga helo. Waxaan u dooneynaa caruusado qurux badan caruurteena, ma ahan kuwa jilicsan oo aan fiicneyn. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo kaa caawinaya inaad u hesho alaab-qeybiyahaaga caruusadahaaga quruxda badan. Dukaamada caruusadaha wanaagsan Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad eegto […]Read More
Waxaa laga yaabaa 21, 2020 0 comments
Qoryaha Caruurtu Ku Ciyaaraan Maaha Waxyaalaha Lagu Ciyaarayo - Sida Sida Dummies oo kale
Waxaa jirta fursad aad u wanaagsan oo haddii aad suuqa ugu jirto xoogaa qoryaha toy-da ah, aadan booqan oo keliya bakhaarka hubka, laakiin xitaa waxaad weydiisatay asxaabta iyo xubnaha qoyska inay sidoo kale iska hubiyaan. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa tixgelisay inaad iibsato mid ka mid ah kaaga, in kastoo aad leedahay dhammaan alaabada lagu ciyaaro ee khatarta ah […]Read More